काठमाडौ, साउन १४ – रचनाकार काजीराज शाक्यका नेपाली भाषाको ‘नौलो तरङ्ग’ र नेपाल भाषाको ‘आहा’ गीति एल्बम सार्बजनिक भएको छ । दुईवटै एल्बममा उनको एकल रचनाका आठरआठ वटा गीत समावेश छन् भने हरिशरण सायमीको संगीत रहेको छ ।
काठमाडौं, साउन ६ – एनएफडिसी राष्ट्रिय चलचित्र अवार्ड शनिबार सम्पन्न भएको छ । यो वर्षको अवार्डमा चलचित्र सायद विभिन्न ७ विधामा पुरस्कार हात पार्न सफल भएको छ । यो चलचित्रबाट निर्देशक सुरज सुब्बा नाल्बो उत्कृष्ठ निर्देशक र पटकथा विधामा अवार्ड हात पारे । यस्तै सायदले सहअभिनेता, छायाँकार, मह जुरी पुरस्कार र सर्वोत्कृष्ट व्यावसायिक फिल्मको अवार्ड जित्यो । यो फिल्मबाटै विल्सन विक्रम राईले उत्कृष्ठ सह अभिनेता, संयम पुरीले जुरी अवार्ड र सञ्जय लामाले सर्वोत्कृष्ठ छायाँकारको अवार्ड हात पारे ।
बिरेन्द्रको वंशनाश पछि नेपाल आइन : उदितनारायण
१२ बर्ष पछि खोला पनि र्फकन्छ भनिन्छ । सायद यसैले पनि होला, गायक उदितनारायण झा १२ बर्ष पछि नेपाल फर्किए । आफ्नै नाममा समर्पित गरिएको एक अवार्ड वितरण गर्नका लागि उनी पत्नी दिपानारायण झाको साथमा शनिबार मध्यान्न नेपाल आइपुगेका थिए ।
यस संसारमा कुरा सबैले गर्छन आफ्नै बिचार माथि राख्न पनि कोशिष गर्दछन तर जुन बिचार तपाईलाइ ठिक लाग्छ , राम्रो लाग्छ र सही छ सन्त महात्मा हरुको बचन हो र शास्त्र लिखित छ भगवान बाणी पनि हो भने त्यही नै श्रेयस
कर्नाली ब्लुज र म
कमल पौडेल बाणगंगा ५ कपिलबस्तु उपन्यास पाउनभन्दा पहिले कर्नाली ब्लुजको बारेमा कतै गाँइगुइ सुनेको थिए तर मैले त्यती ध्यान दिएको थिएन । मैले यी शब्द लेख्दै गर्दा धन्यबाद दिनै पर्छ ।
श्रीमान्ले घात गर्छ भने इमानदार हुन जरुरी छैन,"
नायिका तथा मोडल सिम्पल खनाल परपुरुषसँगको यौनसम्बन्ध दुवै पक्षको इमानदारीमा भर पर्ने बताउँछिन्।
भाग्य बलियो कि कर्म ? यस विषयमा संसारभर िबहस र तर्क हुने गरेका छन्। नायक तथा निर्देशक विम्लेष अधिकारीलाई भाग्यप्रति यति बलियो विश्वास छ कि उनले भिजा आवेदनका लागि समेत साइत हेराएछन्। नभन्दै नायक आर्यन सिग्देललाई रजिेक्ट गरेको अस्ट्रेलियाली दूतावासले विम्लेषलाई एक सातामै भिजा दिएछ। "यो सबै गुरुको करामत हो," विम्लेष भन्छन्, "साइत त्यसै हेराएको होइन नि!"
'सगरमाथा चढ्ने योजना बनाएकी छु’
नायिका निशा अधिकारी मुस्ताङमा एकमहिने माउन्टेन क्लाइम्बिङ्को अभ्यास सकी काठमाडौँ फर्किएकी छन्। ५ हजार २ सय मिटर उचाइमा उनले आइस, रक क्लाइम्बिङ् तथा र्‍याप्लिङ्समेत गरनि्। नेपाल माउन्टेनियरङि् एसोसिएसनमार्फत तालिम लिएकी निशासँग मुस्ताङ अनुभवबारे गरएिको कुराकानी :
अब नेपालमै ब्युटिसियन कलेज
सौन्दर्य व्यवसायप्रति युवायुवतीहरुको रुचि वढेपछि अव यसलाई कलेजमै पढाईने भएको छ । सिटिइभिटी र सौन्दर्य व्यवसायीहरुको छाता संगठन ‘एवीसी हेन्सड्स’को सहकार्यमा व्युटिसीयन कलेजको स्थापन हुन लागेको हो ।